१५ वर्षका छोरा विस्तारैमा थला, आमाको आँशु पुछ्न पुगे माइलाकान्छा (भिडिओ सहित) - Parichay Network
१५ वर्षका छोरा विस्तारैमा थला, आमाको आँशु पुछ्न पुगे माइलाकान्छा (भिडिओ सहित)
सन्तोष बस्याल द्वारा	 ८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ११:२७ मा प्रकाशित
लकडाउनको असर चौतर्फी छ। गरिबलाई ऋणको भारी बोकाको छ। ऋण नपत्याउनेलाई भोकमरिले अत्यालिने अवस्था छ। अधिकाशं शहर बस्नेहरु गाउँ फर्किएका छन। जो शहरमा ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गरेका छन्, उनीहरुलाई काम मिलेको छैन।
सिन्धुपाल्चोक स्थाई घर भई हाल पोखरा १७ महतगौडामा भाडामा बस्दै आएकी शान्ती नेपालीका १५ वर्षीय छोरा सुरज नेपाली बिरामी छन् । उनको हात खुट्टा शरिर केही चल्दैन । बच्चैदेखि ओछ्यानैमा थलिएका सुरजको लागि शान्ती उपचारका लागि अस्पताल धाइन। तर, उपचारका लागि आर्थिक रुपमा सबल नभएपछि उपचारबाट निको हुने रोग आफैसंग बोकेर हिड्न बाध्य छन् उनी।सहयोगका लागि अपिल गर्दा समेत उनले कसैको सहयोग पाइनन् । सायद उनको पुकार यदि कतै भगवान छन् भने उनले सुनेनन्।
घरमा ६ जनाको परिवार छ । तीन छोराछारी, श्रीमान्, आमा र आफू । सबै परिवार शान्ती र उनका श्रीमान् हरि नेपालीकै कमाइमा आश्रित छ । ज्यालामजदुरी गरेर जसोतसो जिवन धानिएकै छ उनीहरुकाे । लकडाउनका कारण थप जटिलता थपिएको छ। लकडाउनका कारण काम सबै ठप्प भएपछी उनको पतिवारलाई थप समस्या परेको छ। ’ न काम छ, न कुनै आम्दानी । के खाने ?’
शान्ति विक्षिप्त हुन्छिन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ ले १५ केजी चामल राहत स्वरुप दिएको थियो तर ६ जनाको परिवारलाई १५ दिन टिकेन। बिरामी छोरालाई समेत भोकै राख्नुपर्ने स्थितिमा पुगेकी छन् शान्ती ।
नाम शान्ती भएर के गर्नु ? मन शान्त छैन । शान्ती नाम ले नै उनलाई कहिलेकाही नराम्रोसंग चिमोट्छ । छोराकै स्यारसुसारमा उनको दिन बित्छ भन्छिन्, ’ पैसो हुँदो हो त सायद उनको छोराले बेलैमा उपचार पाउँथ्यो र अरुका छोरा छोरी जस्तै डुल्थ्यो, खेल्थ्यो, स्कुल पढथ्यो । ’
छिमेकका छोराछोरी हासेको, बोलेको र हिडेको देख्दा उनलाई पनि आफ्नो छोरो त्यसरी नै रमाएको देख्न रहर लाग्छ। सपनामा छोरा निको भएर दौडिएको देख्छिन् । तर, सबै रहर पूरा हुँदाे रहेनछन् भन्दै चित्त बुझाउछिन उनी। आँखा बन्द हुँदा सम्म सत्य जस्तो लाग्छ आँखा खुलेपछि बिलाएर कता हो कता । शान्ती भन्छिन्,‘गरिबलाई भगवानले हेर्छन भन्थे तर हाम्रो त भगवान पनि नरहेछ । सरकारको त के आश गर्नु र ? सरकारका लागि हामी भोट बैंक जस्तै त हौ । आवश्यक परेको बेला मात्र प्रयोग गर्यो अरुबेला अत्तोपत्तो छैन । हामी जस्तो गरिबको पीडा सरकारले पनि बुझेन ।’
शान्तीको आहत भएको जीवनमा राहत बनेर पुगे माइलाकान्छा । माइला (पार्वती गुरुङ) र कान्छा (माया गुरुङ) । लामोसमय देखि युके बस्दै आएका माइलाकान्छा नेपाल बसाइको क्रममा दिनदुखीलाई सहयोग गर्नमै व्यस्त छन् । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ का कारण नेपाल हाल लकडाउनमा छ । ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने यसबाट बढी प्रभावित छन् । गरिब र न्युन आयस्तर भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने हेतुले माइलाकान्छा सहयोग अभियान मार्फत पीडितको घरमै पुगेर सहयोग गर्ने कार्यमा तल्लिन छन्। युकेमा रहेका नेपालीहरुको आर्थिक सहयोगमा आफुहरुले कदम चालेको माइलाकान्छा बताउँछन् ।
बुधबार शान्तीको आँखाको आँशु पुछ्न पुगे माइलाकान्छा । शान्ती सहित उनको परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । आफुलाई यसअघि कोही सहयोग गर्न नआएको र माइलाकान्छाबाट पहिलो पटक आर्थिक सहयोग पाएको शान्तीले बताइन् । ’उहाँहरु मेरा लागि भगवान सरह हुनुहुन्छ । घरमा खाने कुरा केही थिएन । बिरामी छोरा भोकै मर्ने भयो भन्ठान्थे । तर पार्वती गुरुङ र माया गुरुङको आर्थिक सहयोगबाट हाम्रो पनि कोही रहेछ है भन्ने लागेको छ’, उनले भनिन् ।
कोरोना पछी सलहको पालो….
किस्ने तैले के गरिस् ? (कविता)